13 ruux oo ku dhimatay qarax booyad shidaal oo ka dhacay Kenya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta 13 ruux oo ku dhimatay qarax booyad shidaal oo ka dhacay Kenya
13 ruux oo ku dhimatay qarax booyad shidaal oo ka dhacay Kenya
Nairobi (Halqaran.com) – Sida lagu soo warramaya 13 ruux ayaa dhimatay, halka in ka badan 31 kale ay soo gaareen dhaawaco gubasho ah, kaddib markii booyad shidaal ay ku qaraxday galbeedka Kenya, sida ay baahisay Al Jazeera.
Gaariga shidaalka waday ayaa ku dhacay gaari kale taasi oo sababtay in shilkan uu halkaa ka dhaco, isaga oo ka dhacay meel u dhow magaalada Malanga, oo qiyaastii 315km waqooyi-galbeed ka xigta Nairobi.
Wadadaan ayaa ah mid aad u mashquul badan maadaama ay isku xirto dalalka Kenya iyo Uganda.
Charles Chacha oo ah taliye booliis maxalli ah oo ka tirsan Gobolka Siaya oo ah halka uu shilku ka dhacay, ayaa yidhi, “Waxaan tiriyey laba iyo toban meyd ah goobta. Qof kale ayaa ugu dhintay isbitaalka dhaawac.
Kooxaha dab damiska ayaa goobta yimid labo saacadood kadib si ay u damiyaan dabka, halka kuwa ku dhaawacmay qaraxa loola cararay isbitaalka.
“Qaar kale oo badan ayaa loo qaaday isbitaal iyaga oo aad u gubtay, waxaana ku jira caruur yaryar,” ayuu yiri Chacha.
Sawirro ay baahisay warbaahinta Kenya ayaa muujinayay booyada oo holcaysa, iyada oo dad badan ay goobta soo gaareen.
Shilalka gawaarida ee waddooyinka halista ah kuma cusba Kenya iyo gobolka Bariga Afrika oo dhan.
Qarax shidaal booyad